အများဆုံးအမြတ်အစွန်းအတွက် Futures ကုန်သွယ်မှု။ ဇွန်လ 2022 တွင် ကုန်သွယ်မှုလမ်းညွှန်2ခုကို လေ့လာပါ။
အနာဂတ်ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ2ကုန်သွယ်မှု 2022 လမ်းညွှန်ကိုလေ့လာပါ။
နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 20 မေလ 2022
Futures trading ကဲ့သို့သော ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခု၏ 'အနာဂတ်' တန်ဖိုးကို မှန်းဆနိုင်သည်။ ရှေ, ဆီ, ဓါတျငှေ့, စတော့ရှယ်ယာ, ညွှန်းကိန်း, သို့မဟုတ် cryptocurrencies – အစပိုင်းတွင် အပြည့်အဝပိုင်ဆိုင်မှုကိုမယူဘဲ။ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ပိုင်ဆိုင်မှု၏စျေးနှုန်းသည် စျေးကွက်ကသတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ကြံစျေးနှုန်းထက် မြင့်မည် သို့မဟုတ် နိမ့်မည်ကို သင်ခန့်မှန်းရန်ဖြစ်သည်။
ရွေးချယ်စရာများနှင့်မတူဘဲအနာဂတ်စာချုပ်ပိုင်ရှင်သည်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသောအခါအခြေခံပိုင်ဆိုင်မှုကို ၀ ယ်ယူရန်တာဝန်ရှိသည်။ စျေးကွက်ပေါ် မူတည်၍ တိုတောင်းနိုင်သည်သို့မဟုတ်ကြာနိုင်သည်။ သို့သော်သင်၏အနာဂတ်ကန်ထရိုက်စာချုပ်များကိုသက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်နေ့မတိုင်မီတွင်သင်ပယ်ဖျက်နိုင်ပြီးယင်းကသင့်အားအမြတ်အစွန်းရစေနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂတ်2ရောင်းဝယ်မှုဆိုင်ရာလေ့လာမှု 2022 ကုန်သွယ်ရေး XNUMX လမ်းညွှန်တွင်ဤဖြစ်စဉ်သည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်သည်။ နေ့စဉ်လက်လီရောင်းချသူများအတွက်အွန်လိုင်းအကျိုးဆောင်နေရာတွင်မည်သည့်နည်းလမ်းများတည်ရှိသည်ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့လေ့လာသည်။
မှတ်စု: ရိုးရာအနာဂတ်စာချုပ်များကို အများအားဖြင့် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနေရာအတွက် သီးသန့်ထားပါသည်- အနည်းဆုံး ပမာဏများသည် မကြာခဏဆိုသလို6သို့မဟုတ်7ပုံများဖြစ်သောကြောင့် အနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်သည် CFD အနာဂတ်များကို လက်လီကုန်သည်တစ်ဦးအနေဖြင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။.
အတိုချုပ်အားဖြင့်၊ အနာဂတ်များသည် ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခု၏ အနာဂတ်တန်ဖိုးကို မှန်းဆနိုင်စေမည့် ဆန်းပြားသော ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် S&P 500 သို့မဟုတ် FTSE 100 ကဲ့သို့သော စတော့စျေးကွက်အညွှန်းကိန်းမှ မည်သည့်အရာမဆို ဖြစ်နိုင်သည်။ ကုန်စည် ကဲ့သို့ ဂြုံ, ဆီ, ဓာတ်ငွေ့, ဒါမှမဟုတ် ရှေ။ အနာဂတ်ကုန်သွယ်မှုသည်တိကျသောရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုရှိသည်။
ပထမ ဦး စွာ၎င်းတို့အားအနာဂတ်ဘဏ္valueာရေးကိရိယာတစ်ခု၏အမြတ်မှအကျိုးအမြတ်ရယူရန်မှန်းဆသည့်ကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤသည်မှာဘဏ္marketsာရေးဈေးကွက်ရှိအခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထုတ်ကုန်များနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့်အနာဂတ်ကိုအကြီးစားထုတ်လုပ်သူများ၊ လယ်သမားများသို့မဟုတ်ဖြန့်ဖြူးသူများက၎င်းတို့ပါဝင်သောပစ္စည်းများ၏စျေးနှုန်းကိုပိတ်ဆို့ရန်အတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
အနာဂတ်ကန်ထရိုက်သက်တမ်းကုန်သွားလျှင်သင်၏အမြတ်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုများကိုပစ္စည်း၏စျေးကွက်ပေါက်စျေးကဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင်သင်ဝယ်ထားသည့်ကန်ထရိုက်စာချုပ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ၀ ယ်ခြင်းနှင့်သပိတ်မှောက်စျေးနှုန်းတို့အကြားကွာခြားချက်ကိုမြှောက်ရန်လိုအပ်သည်။ အခြားကိစ္စရပ်များတွင်သင်ပိုင်ဆိုင်မှု၏လက်ရှိစျေးကွက်တန်ဖိုးအပေါ် မူတည်၍ ရောင်းချခြင်းဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းသက်တမ်းမကုန်မီသင်၏အနာဂတ်စာချုပ်ကိုကုန်သွယ်ရန်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
Futures Trading ၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများ
Futures စာချုပ်များကို ပိုင်ဆိုင်မှု လူတန်းစားအားလုံးနီးပါးနှင့် ဝယ်ယူရောင်းချနိုင်သည်။
ပိုင်ဆိုင်မှုသည် အနာဂတ်တွင် တန်ဖိုးတက်မည် သို့မဟုတ် ကျဆင်းမည်ကို သင်ထင်မြင်ယူဆနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။
မကြာခဏဆိုသလို အပ်ငွေအဖြစ် စုစုပေါင်းကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုး၏ အနည်းငယ်မျှသာ ထားရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။
အနာဂတ်များ မကုန်ဆုံးမီ သင့်ရာထူးမှ ထွက်သွားနိုင်သည်။
သင်အပ်နှင်းထားသော ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုရုတ်တရက်တိုးခြင်း သို့မဟုတ် လျော့ကျခြင်းအား ကာကွယ်ရာတွင် အလွန်အသုံးဝင်ပါသည်။
Futures များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ဖောက်သည်များအတွက်သာ သင့်လျော်ပါသည်။
၎င်းတို့သည် ရိုးရာပိုင်ဆိုင်မှုများထက် များစွာပို၍ ဆန်းပြားသည်။
အနာဂတ်ကုန်သွယ်ရေးကိုနားလည်ခြင်း - အခြေခံ
အနာဂတ်ကုန်သွယ်မှုသည်လေ့လာသူအသစ်များအတွက်ရှုပ်ထွေးသောစစ်မြေပြင်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်အခြေခံကျကျကိုအခြေခံကျကျဖြိုခွဲရန်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အရေးကြီးသည်။ ငါတို့မပြုလုပ်မီ၊ မြူမှုန်ရှင်းလင်းရန်အတွက် super-basic example ကိုကြည့်ကြစို့။
ခင်ဗျားထင်မြင်ယူဆကြတာကရေနံဈေးဟာတစည်လျှင်ဒေါ်လာ ၂၀ နဲ့စျေးကြီးနေတယ်။ လာမည့်အပတ်များသို့မဟုတ်လများအတွင်းစျေးနှုန်းသည်ဒေါ်လာ ၃၀ အထိမြင့်တက်လာလိမ့်မည်ဟုသင်ယုံကြည်သည်။ ရလဒ်အနေနှင့်သင်သည်အနာဂတ်ကန်ထရိုက်စာချုပ်အချို့ကို ၀ ယ်ရန်ဆုံးဖြတ်သည်။
စာချုပ်တစ်ခုစီ၏ လက်ရှိသက်တမ်းကုန်စျေးနှုန်းသည် ၂၇ ဒေါ်လာဖြစ်သည်။
စာချုပ် 100 ကို သင်ဝယ်ယူရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
အနာဂတ်စာချုပ်များသည် သုံးလအတွင်း သက်တမ်းကုန်သောအခါ ရေနံတစ်စည်လျှင် ဒေါ်လာ ၄၀ ပေါက်သည်။
ဒါကတစ်စည်ကိုဒေါ်လာ ၁၃ ဒေါ်လာနဲ့ပါ ပိုမိုမြင့်မား စာချုပ်စျေးနှုန်း $27 ထက်, ဒါကြောင့်သင်အမြတ်အစွန်းရပြီ။
စုစုပေါင်း၊ သင့်တွင် စာချုပ် 100 ရှိသည် ထို့ကြောင့် ဤအထူးသဖြင့် အနာဂတ်ကုန်သွယ်မှုတွင် စုစုပေါင်း $1,300 (100 x $13) ရနိုင်သည်။
အထက်ဖော်ပြပါအချက်များအရကျွန်ုပ်တို့၏အမြတ်သည်ကန်ထရိုက်စာချုပ်သက်တမ်း (ဒေါ်လာ ၂၇) နှင့်ကန်ထရိုက်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသောအခါအမှန်တကယ်စျေးနှုန်း (ဒေါ်လာ ၄၀) အကြားခြားနားချက်ကိုအခြေခံသည်။ အကယ်၍ ကုန်သွယ်မှုသည်အခြားလမ်းတစ်ခုသို့ရောက်ရှိသွားပါက - ဒေါ်လာ ၁၃ ဒေါ်လာပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်သည် အောက်, ငါတို့လုပ်ရလိမ့်မယ် အရှုံး $ 1,300 (- $ 100 ကို 13 က x) ၏။
အရေးကြီးသောအချက်မှာမှတ်သားရန်အရေးကြီးသည်မှာအနာဂတ်စာချုပ်၏စျေးနှုန်းနှင့်လက်ရှိစျေးကွက်ပေါက်စျေးနှင့်ကွာခြားမှုရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အထက်အခန်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ရှိရေနံစျေးနှုန်းသည် ၂၀ ဒေါ်လာဖြစ်ကြောင်း၊ သို့သော် ၃ လကြာအနာဂတ်စာချုပ်ကို ၂၇ ဒေါ်လာဖြင့်ရောင်းချကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည်။
အရေးကြီးသည်မှာအကြောင်းရင်းမှာအမျိုးမျိုးသောအခြေအနေများပေါ် မူတည်၍ စျေးကွက်၏ပိုင်ဆိုင်မှု၏အနာဂတ်စျေးနှုန်းသည်မည်သည့်အရာဖြစ်နိုင်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။
၃ လကြာအနာဂတ်စာချုပ်၏စျေးနှုန်းသည်တိုတောင်းသောသို့မဟုတ်ကြာရှည်သောစာချုပ်၏စျေးနှုန်းနှင့်ကွဲပြားလိမ့်မည်ကိုသတိပြုရန်လည်းအရေးကြီးသည်။ ရေနံစိမ်းကဲ့သို့သောဥပမာအားဖြင့် ၁ လစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးလျှင် ၂၂ ဒေါ်လာ၊ ၁၂ လစာချုပ်မှာဒေါ်လာ ၄၅ နှင့်အထက်မြင့်တက်နိုင်သည်။
သင်သည်အနာဂတ်စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသောစျေးနှုန်းကိုအကဲဖြတ်ပြီးသည်နှင့်စျေးကွက်များမည်သို့သွားမည်ဟုသင်ထင်မည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်ရှည်လျားသော (သို့) တိုတောင်းသောအစီအစဉ်ဖြစ်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ အချို့ပွဲစားများတွင်၎င်းကို ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းအမိန့်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
ထို့ကြောင့် အကယ်၍ သင်သည်ပိုင်ဆိုင်မှု၏စျေးနှုန်းသည်အနာဂတ်စာချုပ်ထက် ပို၍ မြင့်လိမ့်မည်ဟုသင်ထင်လျှင်၊ သင်ပိုင်ဆိုင်မှုနိမ့်တက်အဆုံးသတ်လိမ့်မည်ဟုထင်လျှင်, သင်တိုတောင်းသွားကြသည်။ ၎င်းသည်အနာဂတ်ကုန်သွယ်မှု၏အကြီးမားဆုံးသောအကျိုးကျေးဇူးများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ အစဉ်အလာပိုင်ဆိုင်မှုများကသင်တက်နေသောစျေးနှုန်းကိုသာမှန်းဆရန်ခွင့်ပြုသည်။
ရိုးရာအနာဂတ်မြင်ကွင်းတွင်ကန်ထရိုက်အမြောက်အများသည် ၃ လသက်တမ်းကုန်ဆုံးလိမ့်မည်။ ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ တိကျတဲ့ ရက်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်သက်ဆိုင်ရာလ၏နောက်ဆုံးသောကြာနေ့ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပြောကြားခြင်းအားဖြင့်စျေးကွက်ကိုဖန်တီးသောဘဏ္institutionာရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်၊ တိုတောင်းသောသို့မဟုတ်ကြာရှည်သောစာချုပ်ကိုဝယ်ယူရန်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။
အနာဂတ်ကန်ထရိုက်များသည်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်နေ့တွင်အမြဲတမ်းရှိလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်သင်၏သက်တမ်းကာလကိုဆက်လက်ဖွင့်ထားရန်မလိုအပ်ကြောင်းသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။ ဆန့်ကျင်တွင်, သင်ပုံမှန်အားဖြင့်သင်နှင့်မထိုက်မတန်မြင်သောအခါအဖြစ်အနာဂတ်ကုန်သွယ်အနေအထားကိုပိတ်နိုင်ပါတယ်။
၎င်းသည်အခြားဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာတူရိယာများနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ သင့်ထံမှအနာဂတ်စာချုပ်ကို ၀ ယ်လိုသည့် ၀ ယ်သူတစ် ဦး ရှိရန်လိုအပ်သည်။ ရေနံ၊ ရွှေသို့မဟုတ်ငွေကြေးကဲ့သို့သောမြင့်မားသောအရည်အချင်းရှိသည့်အတန်းများကိုအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ရာတွင်၎င်းသည်ပြanနာမဟုတ်သင့်ပါ။ အနာဂတ်အရောင်းအဝယ်နေရာသည်ဒေါ်လာထရီလီယံနှင့်ချီ။ တန်ဖိုးရှိသည့်ငွေပမာဏဖြစ်သည်။
စာချုပ်၏စျေးနှုန်းသည် MMBtu တစ်ခုလျှင် $2 ဖြစ်သည်။
နှစ်လစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးနောက်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဈေးနှုန်းမှာ ၁.၅ ဒေါ်လာဖြစ်သည်။
အမြတ်ငွေ 0.50% ကို စာချုပ်တစ်ခုလျှင် $25 ဖြင့် သော့ခတ်ရန် သင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းသင်သည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုတွင်ငွေတစ်လကုန်သွားပြီးတစ်လကုန်သွားသည်။ သေချာတာပေါ့, သင်ကန်ထရိုက်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည်အထိရာထူးပွင့်လင်းထိန်းသိမ်းထားနိုင် - နှင့်အလားအလာပို။ ပင်အောင်ပါပြီ။ သို့သော်သင်အစားသင်၏အမြတ်အစွန်းကိုသိမ်းဆည်းရန်နှင့် ၂၅% အာမခံထားသောအမြတ်အစွန်းရရှိရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
အနာဂတ်စာချုပ်များကို သင်ဝယ်ယူရောင်းချနိုင်သည့် စျေးကွက်များနှင့် ပတ်သက်လာသောအခါ ဖြစ်နိုင်ခြေများမှာ အဆုံးမရှိပေ။ တစ်နည်းဆိုရသော် စျေးကွက်တစ်ခုရှိလျှင် အနာဂတ်စာချုပ်ကို ဝယ်ယူနိုင်သည်မှာ သေချာပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ - ပိုမိုအသေးစိတ်ထပ်မံဆွေးနွေးကြသောအခါတွင်၊ ရိုးရာအနာဂတ်မြင်ကွင်းကို အကြီးစားဝယ်သူများအတွက် သီးသန့်ထားသောကြောင့် သင်ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပေလိမ့်မည်။ CFDs အစား။
Indicator: ၎င်းတွင်အဓိကနှင့်အချို့အသေးစားစတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ညွှန်းကိန်းများပါ ၀ င်သည်။ S&P 500၊ Dow Jones, FTSE 100 နှင့် Nikkei 225 တို့၏မျဉ်းကြောင်းအတိုင်းစဉ်းစားပါ။
စတော့ရှယ်ယာများ: သမားရိုးကျ အစုရှယ်ယာများကဲ့သို့သော အနာဂတ်စာချုပ်များကို ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရန်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ Apple, Facebook ကနှင့် ဒစ္စနေး.
မာကြောသောသတ္တုများ: ရွှေ၊ ငွေနှင့်ကြေးနီတို့ကဲ့သို့ကုန်စည်များသည်အနာဂတ်ကုန်သွယ်ရေးနယ်ပယ်တွင်လူကြိုက်များသည်။ ဤသည်ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုအခြားနည်းဖြင့်အသုံးပြုရန်ခက်ခဲသောပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်ထိတွေ့ခွင့်ရစေသည်။
စွမ်းအင်များ - ၎င်းတွင်အဓိကရေနံစိမ်းနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့စျေးကွက်များပါဝင်သည်။
စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်များ ဂျုံ၊ ပြောင်း၊ သကြားစသည့်စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်များတွင်အနာဂတ်စာချုပ်များကို ၀ ယ ်၍ ရောင်းနိုင်သည်။ ဤအပိုင်းသည်အထူးသဖြင့်အနာဂတ်တွင်၎င်းတို့ပါဝင်သောပိုင်ဆိုင်မှုများ၏စျေးနှုန်းများရွေ့လျားမှုကိုဆန့်ကျင်ရန်ဆန္ဒရှိသောတောင်သူများနှင့်လူကြိုက်များသည်။
လေ့လာသူအနာဂတ်ကုန်သည်များမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများအနက်မှတစ်ခုမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေးပို့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်ရေနံစိမ်းနှင့်ကန်ထရိုက် ၁၀၀၀ ကို ၀ ယ်ပြီးစာချုပ်သက်တမ်းကုန်သွားလျှင်၊ အမှန်တကယ်စည်များကိုကိုယ်ထိလက်ရောက်သယ်ဆောင်ရန်လိုမည်လား။
ဖြစ်ရပ်အများစုတွင်အနာဂတ်စာချုပ်ကိုငွေသားဖြင့်ဖြေရှင်းမည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ မင်းမှာမင်းဆီမှာစာချုပ်ရှည် ၁၀၀၀ ရှိတယ်ဆိုပါစို့။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်နောင်လာမည့်ရက်တွင်ရွှေကို ၀ ယ်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ သို့သော် အကယ်၍ သင်သည်ရွှေအနာဂတ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးရန်ခွင့်ပြုပါကသင်အနာဂတ်အတွက်ပေးဆပ်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည် ငွေသား.
ဤသည်အနာဂတ်စာချုပ်များ၏သပိတ်စျေးနှုန်းအပေါ်အခြေခံသည်နှင့် မဟုတ် လက်ရှိစျေးကွက်ပေါက်စျေး။ ဤနေရာတွင်အဓိကအချက်မှာအနာဂတ်ကုန်သွယ်ရေးမြင်ကွင်းသည်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေးပို့ရန်စိတ်မ ၀ င်စားကြသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကလွှမ်းမိုးထားသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်သူတို့သည်စာချုပ်စျေးနှုန်းနှင့်အခြေချစျေးနှုန်းတို့အကြားခြားနားချက်မှအမြတ်အစွန်းရရန်သာရှာကြံနေကြသည်။
ထိုသို့ပြောကြားခြင်းအားဖြင့်အချို့သောအနာဂတ်စာချုပ်များသည်ငွေသားမဟုတ်ဘဲအခြေခံပိုင်ဆိုင်မှုတွင်အခြေချသည်။ ၎င်းသည် ၂၀၂၀၊ Aprilပြီလတွင် WTI ရေနံအနာဂတ်စျေးနှုန်းကျသွားသောအခါထင်ရှားခဲ့သည် အနုတ်.
ဤအကြောင်းပြချက်မှာစောင်ရေတွင်ဆီများလွန်းနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ coronavirus ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုနှုန်းအရရေနံ ၀ ယ်လိုအားသည်မရှိသလောက်နီးပါးဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေချအနာဂတ်ကန်ထရိုက်များကိုင်ထားသူများသည်၎င်းကိုအခြေချရန်သိုလှောင်စရာနေရာမရှိချေ။
ရလဒ်အနေဖြင့်ကုန်သည်များသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတာ ၀ န်ယူခြင်းမှရှောင်ရှားရန်အတွက်သူတို့၏ရေနံစာချုပ်များကိုချန်လှပ်ရန်မျှော်လင့်ခဲ့ကြသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၎င်းသည်အနာဂတ်စျေးကိုအနှုတ်လက္ခဏာနယ်မြေသို့တွန်းပို့ခဲ့သည် Layman ၏ဝေါဟာရများအရ၊ paid မကြုံစဖူးအတိုတွေဘာမျှမဖြစ်သည့်စည်၏ပို့ဆောင်မှုကိုယူ!
အဓိကအားဖြင့်ရေနံ၊ ဂျုံ၊ ပြောင်း၊ ပြောင်းနှင့်သကြားကဲ့သို့သောပိုင်ဆိုင်မှုများသည်ရောင်းလိုအားနှင့်ရောင်းလိုအားလွှမ်းမိုးနေသည်။ ရောင်းလိုအားနှင့်ဝယ်လိုအားမလုံလောက်ပါကပိုင်ဆိုင်မှု၏စျေးနှုန်းမှာအားလုံးကျဆင်းသွားသော်လည်းအမှန်မှာကျဆင်းသွားနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ထုတ်လုပ်သူများအပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းတို့သည်ကုန်ပစ္စည်းများကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရောင်းရမည်ဖြစ်သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၎င်းတို့သည်အရှုံးဖြင့်ပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ရန်ဖိအားပေးခံရနိုင်သည်။
ပြောင်းဈေးနှုန်းသည် ၄ ​​နှစ်အတွင်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်ဟုဆိုပါစို့
၎င်းသည်အလွန်အကျိုးရှိသည်။ ပြောင်းဖူးထုတ်လုပ်သူတွေအတွက်တော့သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုစျေးနှုန်းကြီးမြင့်စွာနဲ့ရောင်းနိုင်တယ်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်သူတို့သည် ၀ န်ထမ်းများထပ်မံယူရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးထုတ်လုပ်မှုအဆင့်ကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်
ပြောင်းဈေးနှုန်းသည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုကျဆင်းနိုင်သည်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်သူသည် ၁၂ လသက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်အနာဂတ်စာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်
အကယ်၍ ပြောင်းစျေးကွက်တန်ဖိုးဆက်လက်မြင့်တက်နေပါကထုတ်လုပ်သူသည်သူတို့၏ထုတ်ကုန်များကိုပိုမိုမြင့်မားသောစျေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချနိုင်လိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်သူတို့တိုတောင်းသောအနာဂတ်စာချုပ်မှငွေများဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မည်။
နောက်ဆုံးတွင်၊ အထက်ပါဥပမာကလာမည့် ၁၂ လအတွင်းပြောင်းဖူးတန်ဖိုးမည်မျှပင်ရှိပါစေတောင်သူသည်လက်ရှိစျေးနှုန်းကိုပိတ်ဆို့နိုင်သည်ကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အခကြေးငွေရှိလိမ့်မည်, သင်တန်း၏။
Options နှင့် vs အနာဂတ်ကုန်သွယ်ရေး
အနာဂတ်နှင့်ရွေးချယ်စရာများအတူတူပင်ဖြစ်သည်ဟူသောအယူအဆမှားများမကြာခဏရှိသည်။ တစ်ဖက်တွင်, နှစ် ဦး စလုံးဘဏ္instrumentsာရေးတူရိယာသင်တစ် ဦး ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏အနာဂတ်စျေးနှုန်းအပေါ်ခန့်မှန်းရန်ခွင့်ပြုပါ။ အလားတူပင်, နှစ် ဦး စလုံးသငျသညျရှည်လျားသောသို့မဟုတ်တိုတောင်းသောသွားလာရန်ခွင့်ပြုပါ။ သို့သော်အဓိကခြားနားချက်သည်ကုန်ပစ္စည်းကုန်ဆုံးချိန်တွင် ၀ ယ်ယူရန်တာဝန်ရှိသည်။
ရွေးချယ်စရာကိစ္စများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည် 'အခွင့်အရေး' ရှိသော်လည်းစာချုပ်သက်တမ်းကုန်သွားလျှင်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုဝယ်ယူရန်တာ ၀ န်မရှိပါ။ ၀ ယ်လိုအားကိုရွေးချယ်ပါကအရှုံးပေါ်လိမ့်မည်။
အနာဂတ်ကုန်သွယ်ရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသောအခါအခြေခံစာချုပ်ကို ၀ ယ်ရမည်။ ၎င်းသည်အနာဂတ်စာချုပ်များ၏စျေးနှုန်းနှင့်သင်ဝယ်ယူသောစာချုပ်များအပေါ်အခြေခံလိမ့်မည်။ သင်အမြတ်ရရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မလုပ်သည်ဖြစ်စေကန်ထရိုက်စာချုပ်သက်တမ်းကုန်သွားသောအခါပိုင်ဆိုင်မှု၏စျေးနှုန်းအပေါ်မူတည်လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ချက်တစ်လျှောက်လုံးတွင် ကျွန်ုပ်တို့မှတ်သားခဲ့သည့်အတိုင်း၊ အနာဂတ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းကို အများအားဖြင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာငွေကြေးဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင်သည် မကြာခဏ6သို့မဟုတ်7ကိန်းဂဏန်းများဖြစ်သည့် အနိမ့်ဆုံးပမာဏကို ပြည့်မီရန် လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် သင်ဝင်ရောက်လိုပါက Bitcoin CME တွင်အနာဂတ်စျေးကွက်၊ သင်သည်စာချုပ် ၅ ခုကို ၀ ယ်ရန်လိုအပ်သည်။
စာချုပ်တစ်ခုစီသည်အနည်းဆုံး ၂၅ Bitcoin အထိအနည်းဆုံးရင်းနှီးမြုပ်နှံပြီး ၅ တန် Bitcoin ဖြစ်သည်။ လက်ရှိစျေးနှုန်းဒေါ်လာ ၉၀၀၀ ဖြင့်ကြည့်ရှုရန်အနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၂၂၅၀၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်လိုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်အနိမ့်ဆုံးအဆင့်သို့ရောက်နိုင်လျှင်ပင်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအဆင့်အတန်းရှိရန်လိုအပ်သည်။
၎င်းတွင်အနည်းဆုံးအသားတင်ဒေါ်လာ ၁ သန်းသို့မဟုတ်လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်အတွက်အနည်းဆုံးနှစ်စဉ်ဒေါ်လာ ၂၀၀၀၀၀ လိုအပ်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါစံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီပါကအနာဂတ်ကုန်သွယ်ရေးဈေးကွက်ကို ၀ င်ရောက်ရန်အလွန်ခက်ခဲလိမ့်မည်။
သင့်အတွက်ကောင်းသောသတင်းမှာ CFD ပုံစံမျိုးဖြင့်ရိုးရှင်းသောပြသနာကိုကျော်လွှားနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
အတိုချုပ်ပြောရရင် CFDs (Contract-for-differenals) ကသင့်ကိုအခြေခံတူရိယာကိုမပိုင်ဆိုင်ဘဲပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုရဲ့အနာဂတ်တန်ဖိုးကိုတွက်ချက်ရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ အဲဒီအစား၊ သင်၏ကုန်သွယ်မှုသည်အနာဂတ်တွင်ပိုင်ဆိုင်မှု၏စျေးနှုန်းသည်တက်လိမ့်မည်သို့မဟုတ်ကျလိမ့်မည်ဟုသင်ထင်မြင်ခြင်းရှိမရှိပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ဤပိုင်ဆိုင်မှုသည်အမှန်တကယ်မရှိသည့်အတွက် CFDs များသည်ထောင်ပေါင်းများစွာသောငွေကြေးကိရိယာများ၏အမှန်တကယ်စျေးနှုန်းကိုခြေရာခံနိုင်သည်။ စင်စစ်စျေးကွက်တည်ရှိနေလျှင် - အကယ်၍ ၎င်းသည်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာငွေကြေးအတွက်သိုထားလျှင်သော် CFDs ကဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသည်။
ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်အနာဂတ်ကန်ထရိုက်များခြေရာခံသည့်တူညီသောပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းများကိုသင်ရောင်းဝယ်နိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ၄ င်း၏စတော့ရှယ်ယာများ၊ ညွှန်းကိန်းများ၊ အတိုးနှုန်းများ၊ ရွှေ၊ ရေနံ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့သို့မဟုတ် cryptocurrencies - CFD ပွဲစားများကသင့်ကိုကြာရှည်စွာခွင့်ပြုသည် နှင့် အဆိုပါပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်ရေတို။
CFDs များကိုအနာဂတ်စာချုပ်တစ်ခုတွင်ရွေးချယ်ခြင်း၏အကြီးမားဆုံးအားသာချက်တစ်ခုမှာစာချုပ်တွင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်ရက်မရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် CFD များသည်သင်အနေအထားကိုပွင့်လင်းစွာထားလိုသရွေ့သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေဆဲဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်စာချုပ်တစ်ခုကိုသတ်မှတ်ထားသောရက်တစ်ခုအတွင်းအတင်းအကျပ်မလုပ်ခိုင်းဘဲဆိုလိုသည်မှာသင့်တော်သောအချိန်တွင်နေရာကိုပိတ်ရန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။
အနည်းဆုံး Lot အရွယ်အစားမရှိပါ
အစဉ်အလာအရအနာဂတ်ကုန်သွယ်ရေးနေရာသည်ကိန်းဂဏန်း ၆ ခုထက်ကျော်လွန်သောအနည်းဆုံးအရွယ်အစားနေရာချလေ့ရှိသော်လည်း CFDs များတွင်မူထိုသို့မဟုတ်ချေ။ CFDs တွေကိုအကောင့်လက်ကျန်ဒေါ်လာ ၁၀၀ နဲ့သာကုန်သွယ်နိုင်တယ်။ ၎င်းသည်အနာဂတ်နယ်ပယ်တွင် ၀ င်ရောက်လိုသောသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်၊ သို့သော်သင်အနေဖြင့်အရင်းအနှီးအမြောက်အမြားကိုမစွန့်စားလိုပါ။
CFDs ပုံစံဖြင့်အနာဂတ်အရောင်းအဝယ်ပြုခြင်းသည်သင့်အားသြဇာသက်ရောက်စေသည်။ ဤသည်မှာသင်၏အကောင့်၌ရှိသည့်ငွေထက်သင်ပိုမိုရောင်း ၀ ယ်မည့်နေရာဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ မင်းကရေရှည်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။
မင်းရဲ့ခန့်မှန်းချက်အပေါ်သင်အရမ်းယုံကြည်တယ်၊ ဒါကြောင့်သင်က 10x leverage ကိုအသုံးပြုဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အကောင့်လက်ကျန်ငွေဒေါ်လာ ၂၀၀ တွင်သင်၏ကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုးမှာဒေါ်လာ ၂၀၀၀ ဖြစ်သည်။ သင်လုပ်သောမည်သည့်အမြတ်ငွေ (သို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှု) ကိုနောက် ၁၀ ဆမြှောက်ပါလိမ့်မည်။
အဆင့် ၁ - CFD Futures Trading Site တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့ CFD အနာဂတ်ကိုလက်လီဖောက်သည်တစ် ဦး အဖြစ်သင်ရောင်းဝယ်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ပထမဆုံးခေါ်ဆိုမှုဆိပ်ကမ်းသည်သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသောအွန်လိုင်းပွဲစားတစ် ဦး ကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။
စာရင်းမ ၀ င်ခင်သင်သတိပြုရန်လိုအပ်သည့်အချက်များမှာ -
စည်းမျဉ်းများ ၎င်းကို Tier-One လိုင်စင်ရအဖွဲ့ကသာထိန်းချုပ်ထားမှသာ CFD အနာဂတ်ပွဲစားကိုသာသုံးသင့်သည်။ ဤသည်များ၏အကြိုက်ပါဝင်သည် FCA (ယူကေ)၊ CySEC (ဆိုက်ပရပ်စ်)၊ စရဖ (စင်္ကာပူ)၊ သို့မဟုတ် ASIC (Australiaစတြေးလျ) ။
ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုများ - မှာကုန်သွယ်နယ်ပယ်ပြန်လည်သုံးသပ်အချို့သောအချိန်ဖြုန်း ပှဲစား မည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသင်ဝယ်ယူရောင်းချနိုင်သည်ကိုကြည့်ရန်။ CFD ၏အနာဂတ်ကိုသင်ရောင်းဝယ်နိုင်သည့်လူကြိုက်များသောကုန်ပစ္စည်းအတန်းများသည်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ညွှန်းကိန်းများနှင့်စတော့များဖြစ်သည်။
ငွေပေးချေမှုရမည့်နည်းလမ်းများ: CFD အနာဂတ်ကိုအစစ်အမှန်ငွေကြေးဖြင့်သင်အရောင်းအဝယ်လုပ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ပွဲစားသည်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ။ ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းသို့ရန်ပုံငွေများရရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းမှာဒက်ဘစ်သို့မဟုတ်အကြွေးဝယ်ကဒ်ဖြစ်သည်။
အခကြေးငွေများနှင့်ကော်မရှင်များ - CFD အနာဂတ်အရောင်းအဝယ်လုပ်သောအခါသင်အမြဲတမ်းအခကြေးငွေပေးရလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ပွဲမ ၀ င်ခင်ပွဲစား၏စျေးနှုန်းဖွဲ့စည်းပုံကိုသေချာစွာစစ်ဆေးပါ။
ဖောက်သည်ပံ့ပိုး: နောက်ဆုံးအနေဖြင့်မည်သည့်အထောက်အကူပြုလိုင်းများ (ဥပမာ - တိုက်ရိုက်စကားပြောခြင်း) နှင့်မည်သည့်အချိန်နာရီအတွင်းဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့အလုပ်လုပ်သည်ကိုလေ့လာပါ။
သင်သာပွဲစားတစ်ယောက်နှင့်သင်အချိန်ယူရန်အချိန်မရှိလျှင်ဤစာမျက်နှာ၏အဆုံးသို့ကျွန်ုပ်တို့၏ CFD အနာဂတ်ပလက်ဖောင်းငါးခုကိုစာရင်းပြုစုထားသည်။
အဆင့် ၂ - အကောင့်ဖွင့်ပြီးတင်ပါ ID ကိုဖွင့်ပါ
ထို့နောက်သင့်အား ID ပုံစံတစ်ခုတင်ရန်တောင်းဆိုလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် (သို့) အစိုးရမှထုတ်ပေးသော ID ကဒ်များဖြစ်နိုင်သည်။
အဆင့် ၃ - သင်၏အနာဂတ်ကုန်သွယ်မှုအကောင့်ကိုရန်ပုံငွေထည့်ပါ
သင်အသစ်ပြုလုပ်ထားသော CFD ပွဲစားစာရင်းသို့ရန်ပုံငွေအချို့ကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။
အဆင့် ၄: ကုန်သွယ်ရေးတစ်ခုထားပါ
သင်၏သိုက်အားအသိအမှတ်ပြုပြီးသည်နှင့်ချက်ချင်းဖြစ်သောသင်သည်သင်၏ပထမဆုံး CFD အနာဂတ်ကုန်သွယ်မှုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
သင်ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်လိုသော ပိုင်ဆိုင်မှု (ဆီ၊ ရွှေ၊ ဂျုံ စသည်) ကို ရှာဖွေပါ။
အကြာကြီး (အမှာစာ) သို့မဟုတ် အတို (ရောင်းအမှာစာ) ဖြင့် ရှည်ချင်သလား ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ဖြစ်နိုင်ပါက - သင်လျှောက်ထားလိုသော ပမာဏကို သတ်မှတ်ပါ။
အမြတ်အစွန်းယူရန် အမိန့်တစ်ခု သတ်မှတ်ပါ။
သမားရိုးကျအနာဂတ်စာချုပ်နှင့်မတူဘဲ CFDs သည်ဘယ်တော့မှကုန်ဆုံးမည်မဟုတ်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောနေရာမှထွက်ခွာနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ၀ ယ်ယူမှုအမိန့်ဖြင့်ဖွင့်လှစ်ပါကကုန်သွယ်မှုကိုပိတ်ရန်နှင့်အပြန်အလှန်အားဖြင့်အရောင်းအ ၀ ယ်တစ်ခုကိုသာထားပါ။
သင်ကိုယ်တိုင်အနာဂတ်ကုန်သွယ်ရေးပွဲစားကိုသုတေသနပြုရန်အချိန်မရှိသလော။ သို့ဆိုလျှင် ၂၀၂၀ တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ထားသောပွဲစားငါး ဦး ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
Capital.com သည် FCA၊ CySEC၊ ASIC၊ နှင့် NBRB- ထိန်းညှိထားသော အွန်လိုင်းပွဲစားတစ်ခုဖြစ်ပြီး ငွေကြေးဆိုင်ရာ တူရိယာများစွာကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ CFDs ပုံစံဖြင့် အားလုံးသည် စတော့များ၊ အညွှန်းကိန်းများနှင့် ကုန်ပစ္စည်းများကို အကျုံးဝင်သည်။ သင်သည် ကော်မရှင်အတွက် တစ်ပြားတစ်ချပ်မှ ပေးဆောင်မည်မဟုတ်ပါ၊ ပျံ့နှံ့မှုများသည် အလွန်တင်းကျပ်ပါသည်။ Leverage အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများကိုလည်း ကမ်းလှမ်းထားသည် - ESMA ကန့်သတ်ချက်များနှင့်အညီ အပြည့်အဝ။
အချုပ်အားဖြင့်ပြောရလျှင်အနာဂတ်အရောင်းအဝယ်သည်ရွှေ၊ ရေနံနှင့်ဂျုံကဲ့သို့သောပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်ထိတွေ့မှုရရှိရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ စာချုပ်သက်တမ်းကုန်သွားတဲ့အခါမှာပစ္စည်းရဲ့ဈေးနှုန်းကတက်သွားမှာလားဒါမှမဟုတ်ဈေးကျသွားမယ်လို့သင်ထင်သလား။
ထိုသို့ပြောခြင်းနှင့်အတူရိုးရာအနာဂတ်ကုန်သွယ်ရေးနယ်ပယ်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာငွေကြေးဖြင့်သာရနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အနိမ့်ဆုံးပမာဏသည်များသောအားဖြင့်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀၀ ကျော်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမှာ CFDs မှတစ်ဆင့်အနာဂတ်ကုန်သွယ်ရန်ဖြစ်သည်။
သင်၏အမြတ်သည်အနာဂတ်စာချုပ်များ၏စျေးနှုန်းနှင့်စာချုပ်သက်တမ်းကုန်သွားသည့်အခါခြေရာခံသည့်ပိုင်ဆိုင်မှု၏ကွာခြားမှုအပေါ်အခြေခံသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်အနာဂတ်တွင်ရေနံတွင်ဒေါ်လာ ၂၅ ဒေါ်လာဖြင့်ဝယ်ပြီး၊ ဆီကိုဒေါ်လာ ၄၀ ဖြင့်ရောင်းချသည့်အခါစာချုပ်ကိုရောင်းလျှင်စာချုပ်တစ်ခုချင်းစီအတွက်ဒေါ်လာ ၁၅ ရလိမ့်မည်။ ထို့နောက်သင်ရရှိသောကန်ထရိုက်စာချုပ်များအတိုင်းသင်၏ $ 25 အမြတ်ကိုမြှောက်ရန်လိုလိမ့်မည်။
သင်လုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်သင် CFDs မှကိုယ်စားပြုသောအနာဂတ်ရောင်းဝယ်မှုကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
သင်ငွေသားနှင့်ဆန့်ကျင်သည်အဖြစ်ကခြေရာခံသောပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်အခြေချသောအနာဂတ်စာချုပ်ထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြမှသာ။ ဤကန်ထရိုက်စာချုပ်များကိုပုံမှန်အားဖြင့်သာဝယ်ယူသည် ထုတ်လုပ်သူများ ခြံတစ်ပုံစံအဖြစ်ပိုင်ဆိုင်မှု၏။
ထုံးစံအရအနာဂတ်ကုန်သွယ်ရေးမြင်ကွင်းတွင်အနည်းဆုံးပမာဏသည် ၆ မှ ၇ အထိရှိသည်။ CFD အနာဂတ်ရောင်းဝယ်ရေးကိုသင်ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်လက်ကျန်ငွေဒေါ်လာ ၁၀၀ နဲ့မကြာခဏကုန်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
ငါ Bitcoin အပေါ်လက်လီဖောက်သည်အဖြစ်အနာဂတ်ကုန်သွယ်နိုင်သလား?
အကယ်၍ သင်သည်လက်လီဝယ်သူတစ် ဦး အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရလျှင် CME Bitcoin အနာဂတ်စျေးကွက်ကိုသင်ဝင်ရောက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ၊ အကြောင်းမှာယင်းသည်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာငွေကြေးအတွက်ဖြစ်သည်။ သင်, သို့သော်, Bitcoin CFDs ကုန်သွယ်နိုင်ပါလိမ့်မည် - အားလုံးရည်ရွယ်ချက်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်, သမားရိုးကျအနာဂတ်စျေးကွက်ကဲ့သို့အများကြီးအတူတူပင်လုပ်ကိုင်သော။